sosegado : မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ (၃)
Posted by sosegado at 9/25/2010 09:26:00 PM
တကယ့်အဖြစ်အပျက်လိုပဲ ဖတ်ရင်းနဲ့ ...
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မျောသွားတယ် ... ပြီးတော့ ... မောသွားတယ် ...
အသစ်တင်လို့ အပြေးအလွှားလာခဲ့ရတယ် ဖတ်ပြီး ပိုမောသွားတယ် ကြောက်စရာကြီးနော် တော်သေးတယ် မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ ကသတ္တိရှိလို့
ဆက်ဖတ်ချင်သေးတယ် မြန်မြန်လေး ရေးပါဗျာ
အော် ဋ္ဌေသာ် ဒါ့ ကြောင့်ကိုး
နို့ကျုတ်ဖြင့်မသိပေါင်ဗျာ-
အော် မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ ဘ၀ က သနားရာပါလား
မချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းရပြီး ချစ်တဲ့သူနဲ့ကွေကွင်းရတာ ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူးးးး
အနဲဆုံး..မဂ္ဂဇင်းမှာ ၄ လ လောက် ထည့်ရတဲ့ အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်လောက်ရေးဗျာ..
ကျနော်ငယ်ငယ်က ကြိုက်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီးတွေ (တင့်တယ်၊ဝင်းဦး၊ သန်းဆွေ) တို့ စာတွေဖတ်နေရသလိုမျိုးကို ..တအိအိနဲ့ စာဖတ်သူကိုဆွဲခေါ်သွားတာ..သိတ်ကောင်းတာပဲဗျာ..
အခုဝတ္ထုလေးက ကိုယ်တိုင်နေခဲ့တဲ့ အရပ်တွေမို့ မျက်စေ့ထဲမြင်ပြီးခံစားလို့ရတယ်ဗျာ...
မြန်မာပြည်မှာမွေး၊ မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်သွားတဲ့ သူတွေက မြန်မာဆိုတာကိုနှိမ်တာလောက်တော့ ကျမရွံမုန်းတာမရှိဘူး၊
အဆုံးသတ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ဆက်ဖတ်ဖို့ ဆက်မျှော်နေသည်. အကြာကြီးတော့ မနားပါနဲ့နော်..... ကိုယ်မရေးရတိုင်း အားမနာတမ်း တောင်းဆိုသွားပါသည် ကိုဆိုဆီ...
ဖတ်လို့ကတော့ ကောင်းမှကောင်းပဲ ကိုစိုးစီရေ။
လျှို့ဝှက်လွန်းတဲ့ မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီမှာ . . . .
သီချင်းလေးတောင်မှ သွားသတိရမိတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တောင်မှ တကယ်ရောက်သွားသလိုပါပဲလား။ ကောင်းချက်။
မကောင်းချက်ကတော့ ကြာသဗျို့။ စောင့်သူ ရင်မောတယ်။ ညန်ညန်လုပ်ဂျ။
မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ အိမ်ထောင်ကျတာ တတိယပိုင်းမှ ဖော်ထားတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတယ်..
ကံမကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ။
အမေရိကားတစ်ခွင်ကို ၀တ္ထုနဲ့အတူ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တာ စာရေးသူတော်တယ်လို့ ချီးကျူးမိသေး။
ဖတ်ကောင်းတယ် ကိုsosegado။ ဇာတ်လမ်းက စိတ်ဝင်စားဖို့ တကယ်ကောင်းတယ်။ ဆက်ရန် မျှော်နေပါတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ ကိုသဘောကျသည်၊
ဒီစာသားလေး သဘောကျတယ်ဗျာ။ အခန်းဆက် ဝတ္ထုပုံစံလေး ဖတ်ရတော့ တမျိုးဆန်း သလို ခံစားရတယ်။အပိုင်း(၄) ကို မျှော်နေတယ်နော်။
မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ ကတော့ စွဲဆောင်တုန်းပါပ
ကိုစိုးဆီ အမေရိကားအပြန်ခရီးနဲ့အတူ မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီ ၀တ္ထုအဆုံးသတ်မယ်ထင်တယ်..
မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေအကြောင်းပါ ထည့်ရေးထားတော့ ၀တ္ထုရဲ့ ရသနဲ့အတူ သုတပါတွဲပြီး ရလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
(မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီကို ကျနော် ဘာကြောင့်သူဆီကိုလာဘို့၊ သူနှင့်တွေဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အကြောင်း မပြောဖြစ်သေးပေ။)
ဇာတ်လမ်းက လွမ်းစရာတွေ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ဦးမှာလားဟင်...
မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီအစား မလွမ်း ချင်တော့ဘူး... မိန်းမသားတယောက်အနေနဲ့ သူများနိုင်ငံမှာ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အခက်ခဲတွေက သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ... မထားခဲ့နဲ့တော့နော်...ကိုဆိုဆီဖြစ်ဖြစ် အမေရိကားအပြီး လိုက်ရင်လိုက်နေလိုက်။ မဟုတ်ရင် သူ့ကို ဖြောင်းဖြချော့မော့ပြီး စလုံးခေါ်လာခဲ့လိုက်နော်... ဒီလိုပဲ ဇာတ်သိမ်းစေချင်တယ်... :)
တော်သေးတယ်.. အဲလို ယောက်ျားမျိုးနဲ့ ကလေးမရခဲ့တာ..
ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီကို ကံကောင်းစေချင်တယ်..
Nice story! I am sorry, she didn't get to enjoy beautiful bay area.
အပိုင်း(၄) မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ....???
သေချာတာ တစ်ခု ကတော့မျက်ဝန်း လဲ့ ပြာရီကို
တကယ်ချစ်သွား ခဲ့တာ ဆို တာပါပဲ။
“ချစ်တယ်” ဆိုတာ ပြောသလောက် မလွယ် ပါဘူးနော်၊
အငိုလွယ်ပြီး အရှိုက် ခက် သလိုပါပဲ။
ဇတ်ထဲ မှာ တော့မျောနေတာ သေချာ နေပြီ နော်၊
ဇာတ်အိမ် ခိုင် ပါ တယ်။
တကယ်ကို ဇာတ်လမ်းထဲမှာမျောသွားမိတယ် ကိုဆိုဆီ....အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံမှာသေဆုံးသွားတတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့လား....
ကောင်းတယ်ဗျို့...ကိုဆိုဆီ ရေ..အပိုင်းလေးကို မျှော် နေတယ် ဗျာ...
မျက်ဝန်းလဲ့ပြာရီရဲ့ လက်မောင်းကို ကိုင်ပြီး
ဆက်ပြောလေ.. လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာက ရုပ်ရှင် မြင်ကွင်းတစ်ခုလိုကို ညအိပ်ရာဝင်မှာတုန်းကတောင် မြင်ယောင်လိုက်မိသေးကြောင်း ပြန်လာပြောပြခြင်းပါ။
ဟူးးး စိတ်မောလိုက်တာဗျာ ဒါပေမယ့် အရမ်းကို ဆက်ဖတ်ချင်နေမိအောင် ကောင်းတယ်ဗျာ